विवाह को लागि अद्वितीय उपहार। तिनीहरूले कसरी असामान्य हुनुपर्छ
यो सबै को पहिलो विवाह पाहुनाहरूलाई निमन्त्रणा प्राप्त गरेपछि डेलिभर गर्नेछ भन्ने वरदान छलफल सुरु कुनै रहस्य छ, छैन तिनीहरूले विजय जानेछन् के। त्यो हो विवाह समारोह किनभने - एक शानदार प्रभाव छ जसमा एक ब्रान्ड नयाँ परिवार, समाज को अर्को एकाइ। र यो दिनमा म सबै कुरा गर्ने प्रस्तुत सहित जादुई र मूल हुन चाहन्छु।
विवाह को लागि मूल उपहार एक लामो समय को लागि उनलाई प्राप्त र उत्सव को सबै सहभागीहरू सम्झना गर्न राम्रो। अक्सर पनि पैसा सौंपन मूल हो। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले peddle र एक विशाल बक्स मा प्रस्तुत, कहिलेकाहीं पेपर को गारलैंड गर्न चिपके र यो firecrackers, राम्रो, यो कहिले काँही हुन्छ देखि जारी, बिल र सिक्का बस अर्को भन्दा बढी ल्याउने छ जो, कसैले गर्न भुइँमा जवान स्क्याटर अघि टाउको छ कि परिवार।
मूल को विवाह को लागि उपहार धेरै प्रकार को हुन सक्छ:
आफ्नै हातले बनाएको;
हाल पहिले नै लेखे किनभने, उपहार को बाँकी दुई केन्द्रित हुनेछ। आफ्नै हातले बनाएको विवाह लागि अद्वितीय उपहार - सधैं एक असामान्य र सुखद छ। साँच्चै, जो मनपर्छ बुना ऊन गलैँचा वा फर्नीचर twigs बनेको छैन? हामी अत्यधिक किनभने तिनीहरूले प्रेम र शुद्ध हृदयले छन् पछि खोजे जस्तै शुरू। बस खरीद - तर एउटा उपहार किनेको भनेर मान्छु छैन। यो त छैन। लामो समय को लागि एक यस्तो वर्तमान चयन गरिएको छ, र अघि ठीक किन्न के, कुनै पनि रंग, आकार र यति मा बारेमा लामो चर्चा छ।
जो अतिथि प्रस्तुत गर्न सक्छन् विवाह लागि सबैभन्दा मूल उपहार वर्णन।
निस्सन्देह, यो सुहागरात, तर केवल एक यात्रा, तर, उदाहरणका लागि, अफ्रीकी सफारी वा गर्न सक्छन् सगरमाथा चढाई। तिनीहरूले पनि एक असामान्य खेल उपकरण हुन सक्छ। यदि युवा स्कुबा डाइभिङ संग swam कहिल्यै छ, ध्यान दिएर मित्र यो अवस्था उपाय गर्न सक्नुहुन्छ।
एक रूपमा उपस्थित थप अर्केस्ट्रा को विवाह भोजमा एक निमन्त्रणा हुन सक्छ। उहाँले युवा र अतिथि को अनुरोध मा सबै रात संगीत प्ले हुनेछ। एक अद्भुत आश्चर्य र अब टेलिभिजनमा ठूलो शूटिंग छन् जो शो, एक भाग लिन जवान निमन्त्रणा गर्न सकिँदैन।
यो विवाह लागि मूल उपहार शानदार कुरा हुन पर्दैन भन्ने टिप्पण लायक छ। यो तिनीहरूले दुलही लागि असामान्य हुन र आफूलाई दुलहा गर्न सक्ने पर्याप्त छ। उदाहरणका लागि, बेलुन उडान। यस्तो यात्रा सस्तो छैन, त्यसैले हावा संग सुखद र रोमान्टिक दुवै हुनेछ। दुलही वा दुलहा प्रेम घोडाहरू र एक निजी घरमा बस्नुहुन्छ भने, अतिथि तिनीहरूलाई ठूलो stallion दिन सक्छन्। सुन्दर मूर्तिहरु र नक्काशी पेंडेंट संग पनि असामान्य उपहार गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। फोटो खिच्न वा असामान्य cookware को एक सेट आदेश बारेमा हामी के भन्न सक्छौं!
त्यहाँ सुखद र अनपेक्षित उपहार प्रशस्त छन्। उदाहरणका लागि, सबै भन्दा महंगा मा रोमान्टिक डिनर शहर मा रेस्टुरेन्ट सबै भन्दा राम्रो सौंदर्य सैलून को एक वा सञ्चालन स्पा र सौन्दर्य उपचार। कार भाडा वा होटल, मा सप्ताह मा एक यात्रा मा नवविवाहितहरूका लागि कोठा सबैभन्दा रोमान्टिक शहर देश वा समुद्र तट मा विवाह समारोह को पनि पुनरावृत्ति को सुरक्षित को कोटीमा श्रेय गर्न सकिन्छ "आफ्नो विवाह वार्षिकोत्सव लागि मूल उपहार।" आखिर, तिनीहरूले जगाउन र छुट्टी bustle को दिन देखि एक बिट subsided हुन सक्छ कि भावना बलियो बनाउन अभिप्रेरित छन्।
यो छाप, सकारात्मक भावना र समुद्र को सम्झनाहरु धेरै छ - निश्कर्षमा यो विवाह लागि मूल उपहार भनेर टिप्पण लायक छ। किनभने यो कहिलेकाहीं पनि धेरै रोचक एकदम सजिलो छ, र उपहार, रचनात्मक चयन गर्नुहोस्।
प्रतियोगिता मा आफैलाई प्रस्तुत गर्न कसरी: व्यापार कार्ड
संविधान दिन Dagestan को: इतिहास र छुट्टी को परम्परा।
हेलोवीन कसरी मनाउन: छुट्टी, परम्परा र उत्सव विचार को इतिहास
कसरी घर मा छोराछोरीको लागि घर बनाउन?
क्युबा कोट को शस्त्र। विवरण र विशेषताहरु
जस्ता लेप। समीक्षा, तयारीको को वर्णन
धेरै वर्ष कसरी बालबालिकाको दाँत हुनुपर्छ। 1 वर्ष मा दाँत को सही नम्बर
पिक - यो विशेष गरी हो
बजार र बजार तंत्र
अनुहार आदर्श माटो
असबाबवाला फर्नीचर "एम्बर"